Beach flat LanaDoti2 phantsi NP Paklenica - I-Airbnb
Beach flat LanaDoti2 phantsi NP Paklenica
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVlasta
Ngaba ufuna nje ukuvuka, ujonge ngaphandle kwefestile kwaye ubone ulwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka olukhazimulayo phantsi kwelanga? Ngaba ikomityi yekofu kwi-terrace enkulu kunye nembono yendalo enhle, ulwandle kunye nesiqithi? Okanye ube nebarbecue kunye nesidlo sasemini kwitafile enkulu yamatye phantsi komthi enamaza akunika ukufefa okuthambileyo? Yile nto amagumbi ethu akunika yona. Ulwandle olungaxinananga phambi kwendawo yakho yokuhlala kunye nayo yonke into yokwenza le holide yakho yehlobo ilungileyo okwangoku.
Izindlu zeLanaDoti1 kunye neLanaDoti2 zombini zixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi elinye lokulala elinethafa elikhulu elinombono elwandle. Bobabini banokuthatha abantu aba-4 (ubuninzi babantu abasi-8 ukuba babhukishwe kunye). Bayinxalenye yendlu enendawo yokupaka yabucala, ulwandle, ibarbecue yamatye, itafile yamatye ngaselunxwemeni, iilounge ezininzi, i-sunshades, ishawari yangaphandle, kunye nayo yonke into oyifunayo ukuze ube neholide yehlobo.
IPaki yeSizwe iPaklenica (kwintaba iVelebit) ikumgama oziikhilomitha ezi-1 kwaye ibonelela ngeehambo ezimangalisayo ehlathini, phakathi kwemiwonyo yayo emibini nemiqolomba. IPaki yaziwa kakhulu ngobuninzi bayo bejoloji, kunye noluhlu olubanzi lwezityalo nezilwanyana.
Beach phambi kwendlu, National Park Paklenica
Umbuki zindwendwe ngu- Vlasta
Ukuba ufuna naluphi na uhlobo loncedo, silapha ngenxa yakho. Nceda ucwangcise iihambo zakho. Ukutshintshela kwisikhululo seenqwelomoya okanye kwisikhululo sebhasi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Seline